China Imidazole Ukwenziwa kunye nefektri | Abakhululekileyo
CAS Hayi: Ukuhanjiswa
Intengiso: Ehlabathini lonke
Inkangeleko: Mhlophe ngumgubo crystalline
Ucoceko (GC): ≥99%
Igubu le-25kg / yeFayibha, 9Mt / FCL
I-UN 3263, iklasi: 8, Ukupakisha iqela: III
Agent Iarhente yokunyanga okanye ukukhawulezisa ii-epoxy resins;
Kwishishini lokuxuba amayeza, abaphakathi kwezinye i-API, ezinje nge-Imazalil, Tioconazole, Bifonazole.
☑ Izinto ezibalulekileyo zokubulala izitshabalalisi kwi-synergist ye-boric acid, ukulungiswa kwesibulali zinambuzane kunye ne-bactericide.
☑ I-Imidazole yinto ebaluleke kakhulu ekrwada kwaye iphakathi kwimveliso yeekhemikhali entle, enoluhlu olubanzi lwezicelo. I-Imidazole ayikho kuphela kwi-purine amino acid ye-ribonucleic acid kunye ne-deoxyribonucleic acid, kodwa nakwii-amino acid. Kwangelo xesha, licandelo elisebenzayo lolwakhiwo lwezibulali zinambuzane, ii-enzyme inhibitors, iziyobisi kunye neekhemikhali ezintle. Ke ngoko, imidazole kunye neziphumo zayo zihlala ziyindawo enophando. Kuba iringi ye-imidazole ye-imidazole kunye neziphumo zayo zinee-atom ezimbini ze-nitrogen, ezinokusetyenziswa njengomnikeli we-elektroni omnene, imidazole lelinye lamaqela asebenza ngokuxhaphakileyo kutshintsho lwekhemesti yentsimbi.
IdImidazole inokusetyenziswa njenge-arhente yokuphilisa i-epoxy resin, ukuphucula iipropathi zoomatshini ezinje ngokugoba, ukuzolula kunye nokucinezela, ukuphucula iipropathi zombane zokugquma kunye nokumelana neekhemikhali. Isetyenziswa kakhulu kwiikhompyutha nakwizinto zombane; isetyenziswa kwiibhodi zesekethe eziprintiweyo kunye neesekethe ezihlanganisiweyo njengearhente yokubulala ubhedu; inokusetyenziswa nakwizixhobo ze-elektroniki;
IsIsetyenziswa njengemveliso ekrwada, enje ngee-antifungal agents, ii-antifungal agents, ii-hypoglycemic agents, i-plasma eyenziweyo, ii-trichomonal agents, ii-bronchial asthma agents, ii-anti rash agents, njl .; isetyenziswa njengezinto zokubulala izitshabalalisi, i-synergist yee-boric acid agents, ukulungiswa kwamayeza okubulala izitshabalalisi kunye nefungicides; Ukongeza, ikwasetyenziswa njenge-urea i-formaldehyde resin ephilisa iarhente, iziyobisi ezifotayo, izinto zokubambelela, ukutyabeka, iiarhente zokunyanga irabha, iiarhente zokulwa nerhashalala, njl njl.
☑ Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava emveliso;
Izinto ezibhalisiweyo phantsi kwemigaqo ye-EU-REACH;
☑ Imveliso evunyiweyo zizizwe ngezizwe kumashishini aliqela;
Ukuhanjiswa kwe-Just-in-time: i-1 yeveki ekhokelayo ixesha.
CAS 3003-25-2, I-CAS 453-18-9, (R) -3-Aminobutanol, 2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3, Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl,